N'ịrụ ọrụ iji melite arụmọrụ Organic nke ụdị saịtị ọ bụla - site na saịtị mega nwere ọtụtụ nde peeji, gaa na saịtị ecommerce, ruo obere azụmahịa na mpaghara, enwere usoro m na -enyere na -enyere m aka inyocha ma kọọ arụmọrụ ndị ahịa m. N'ime ụlọ ọrụ na -ere ahịa dijitalụ, ekwetaghị m na ụzọ m si pụọ iche… Usoro m esighị ike, mana ọ
Ọzọkwa, ana m arụ ọrụ na azụmaahịa na-ahapụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ m iji bulie ọnụnọ YouTube ha… na, ọzọkwa, ụlọ ọrụ ha na ha na-arụ ọrụ nwere nke akaụntụ ha niile. Anọ m na-eme mkpesa banyere ụlọ ọrụ na-eme nke a ihe karịrị afọ iri ugbu a ma na-adụ ndị ahịa ọdụ ka ha ghara ime nke a. Ọ dịghị azụmaahịa ọ bụla ga-enye nbanye na okwuntughe iji jikwaa akaụntụ ọ bụla. Kwesịrị ekwesị pụtara
O doro anya na mmetụta nke mgbasa ozi mmekọrịta dị ka ọwa ahịa na-abawanye kwa afọ. Platformsfọdụ nyiwe na-ebili, dị ka TikTok, ụfọdụ na-adịkwa ka Facebook, na-eduga na mgbanwe mgbanwe n'àgwà ndị ahịa. Agbanyeghị, kemgbe ọtụtụ afọ ndị mmadụ jiri ụdị eji eme ihe na mgbasa ozi mmekọrịta, yabụ ndị na-ere ahịa kwesịrị ichepụta ụzọ ọhụrụ iji nweta ọganiihu na ọwa a. Ọ bụ ya mere ị ga-eji lekwasị anya na usoro ọhụụ kachasị dị mkpa maka ahịa ọ bụla